The Gardener: မုတ်ဆိတ်မရိတ်မီ ရထားရောက်လာခြင်း
အခုတလော စာဖတ်ရတာ အတော်လေးပျော်စရာကောင်းနေတယ်။
ရုံးကသူငယ်ချင်းပြောတာနဲ့ Barber paradox ကို wiki မှာရှာဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ အတော်လေးရယ်ရတယ်။
ဆတ္တာသည်တစ်ယောက်တည်းရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် မြို့မှာက မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဖို့ဆိုရင် သူ့ဆီပဲလာကြရတယ်။ မြို့မှာက လူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ တစ်ချို့က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရိတ်တယ်။ တစ်ချို့က အဲဒီ ဆတ္တာသည်ဆီလာရိတ်တယ်။ အဲဒီ ဆတ္တာသည်ကလည်း ကိန်းခမ်းကြီးတော့ သူ့မှာ စည်းကမ်းတစ်ခုထုတ်ထားတာရှိတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရိတ်ဖူးတဲ့သူကို သူက မရိတ်ဘူးတဲ့။ (ကြီးကျယ်ထှာ)။ အဲဒီတော့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
အဲဒီ ဘာဘာ(ဆတ္တာသည်) ဟာ သူ့မုတ်ဆိတ်ရောသူရိတ်သလား။
သေချာတွေးကြည့်တော့လည်း ပြုံးချင်စရာကောင်းလာတယ်။ Paradox တွေဟာ အဲဒီလိုမျိုးရသတွေပေးပါတယ်။ Philosophy မှာ အလှတရားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ မနေ့က Jean-Paul Sartre ဖတ်ရင်း သူ René Descartes, ကို ငြင်းတာတွေ အတော်လေး ခေါင်းစားသွားပါတယ်။ ဟိုလူက I think, therefore I am ဆိုပြီး ego(၀ါ)အတ္တ(၀ါ) ငါ ဆိုတာရဲ့ရှိမှုကို သက်သေထူပြီး Sartre က အဲဒီ ငါနှစ်ခု I think က I နဲ့ there I am က I ကို ပြန်ခွဲနေတာ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ who I am ကို ရေးတုန်းက Sartre မဖတ်ရသေးတဲ့အတွက် I ကို အပြင်က ရှူမြင်တဲ့အယူအဆဟာ နောက်ပိုင်း မော်ဒန်ဝါဒကို လွှမ်းမိုးလာတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ မော်ဒန်ဘိုးအေကြီးတွေကို Sartre ရဲ့ ၀ါဒတွေလွှမ်းမိုးခဲ့ပုံလည်းရဟန်တူပါတယ်။
Sartre ရေးတာတွေ ပြန်ရေးပြဖို့တော့ ဘဒ္ဒကမ္ဘာကြီးက အချိန်မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ တကယ်တော်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့လုပ်သွားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့တင်သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းကို သိနိုင်တာပါပဲ။ သူတို့စာလေးနှစ်မျက်နှာရေးလိုက်တာဟာ ကိုယ့်အတွက် တစ်လလုံးပြန်စဉ်းစားစရာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။ Sartre ဆိုရင် Philosophy Professor လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမဆိုထောင့်စေ့အောင်ရေးပုံရပါတယ်။ Philosophy ရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုက တခြားဘာသာတစ်ခုနဲ့ ဖလှယ်ပြီးပြောရခက်တာပါပဲ။ ဒါကလည်း ဘာသာရပ်တော်တော်များများရဲ့ အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကားဆိုပြီးတစ်ခုတည်းမရှိလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရသိပ်များတဲ့အတွက် ဖတ်နေတုန်း သိချင်တာ ပြန်ရှာနေရတာက ပိုကြာပါတယ်။ ဒါဖြင့်လည်း မဖတ်ဘဲနေပေါ့ဆိုရင်လည်း မဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ တစ်ချို့စာတွေရဲ့ရသကို အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်ဖို့ဆိုရင် အခြေခံအကြောင်းအရင်း၊ အခြေခံဒဿနတွေကိုလည်း သိဖို့လိုပါတယ်။
မနေ့က အိပ်ခါနီး အချိန် တစ်နာရီခွဲလောက်ရတာနဲ့ စာနည်းနည်းဖတ်တယ်။ ပထမဖတ်တာက Osho ရဲ့ Courage ကို ဆက်ဖတ်တာပါ။ အဲဒီစာအုပ်က ၂၀၀၉ မှာထုတ်ပါတယ်။ တော်တော်များများစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေရင် အဲဒီစာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေမှာ စိတ်က နစ်နေတတ်ပါတယ်။ အခုလည်း စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ခုပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဂျိန်းဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဓမ္မပုံပြင်ပါ။ ဂျိန်းတွေရဲ့ဘုရားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှတော့ တိထ္တိဆရာကြီးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ထားလိုက်ပါတော့ သူ့ဘာသာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူပြောတာ ကောင်းတာလေးတွေ့ရင်လည်း သဘောကျလိုက်တာပါပဲ။ လောကကို လွန်မြောက်တဲ့တရားနဲ့ လောကထဲကတရားတွေနဲ့မတူပါဘူး။ ဗုဒ္ဓက သူ့ကို တိထ္တိလို့သတ်မှတ်ရတာက သူ့တရားတွေက လောကကနေ လွန်မြောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဆိုလိုတာပါ။ အဲဒါကို ခွဲခြားပြောရတာက လူလိမ်ပြောသမျှ အလိမ်တွေချည်းပဲဆိုတာမျိုးလိုဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုရားအများဆုံးထွက်တဲ့နိုင်ငံလို့တောင်ပြောနိုင်တယ်။ ဘုရားဆိုတဲ့ ပညတ်တစ်ခုကို ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလို သဘောထားပြီးပြောရင် Made in India ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အဲဒီမှာ ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာဆိုတာတွေက ဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကတည်းကရှိတယ်။ လောကကို မလွန်မြောက်တာကလွဲရင် ကောင်းတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ဆီမှာဝါဒတွေသိပ်များတယ်။ မော်ဒန်ပရဗိုဒ်တွေ၊ ပို့မော်ဒန် ပရဗိုဒ်တွေ ဒဘိတ်(Debate) လုပ်တာတို့။ ဒီကွန်စထရပ်ရှင်းနစ်တွေနဲ့ အီဗော်လူးရှင်းနစ်တွေ နပမ်းသတ်တာတို့ စသဖြင့်စည်းကားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အမြင်တစ်ခုက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ဘူတာမှာ စောင့်ဆိုင်းနေတုန်းနေရတဲ့ ဘူတာကအခန်းလေးနဲ့တူတယ်တဲ့။
စကြ၀တေးမင်းဆိုတာ စင်္ကြာမုန့်ရောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ အင်မတန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မင်း။ သူ့မှာ အစုံရှိတယ်။ သားကြီးရတနာ၊ မယားကြီးရတနာ (ဟမ် .... မယားငယ်ရောရှိလား .. xanthos၏ အာမေဋိတ်)။ အမတ်ကြီးရတနာ ..စသဖြင့်။ ဒါ့အပြင် စင်္ကြာလက်နက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက စကြ၀တေးမင်းဟာ သိပ်ကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်။ ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆုပန်တာတောင် ရှေ့မှာစီနီယာအများကြီးစောင့်ရတယ်။ သီလတွေဘာတွေလည်းစောင့်ထိန်းရတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါဖြစ်ဖို့ခက်သလောက်နီးပါးကို ခက်ခဲတဲ့ဘ၀။ အဲဒီဘ၀ကြီးကို ဘုရင်တိုင်းတောင့်တကြတယ်။ တကမ္ဘာလုံးကိုပိုင်တယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီရတောင့်ရခဲဘ၀ကြီးမှာ ကောင်းတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ နောက်ထပ်အယူတစ်ခု ဟိမ၀ိန္တာနဲ့အပြိုင် မြင့်မြတ်သောတောင်တန်းဆိုတာရှိသေးတယ်။ ဂျိန်းဘာသာမှာရှိတယ်။ မြေပုံထဲမှာတော့ရှိချင်မှရှိမယ်။ ရွှေတွေစိန်တွေနဲ့တောင်တန်းလို့ဆိုတယ်။ (ဒါကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ Midas ဘုရင် တောင်ပေါ်မှာချော်လဲတုန်း လက်ညှိုးနဲ့ထိသွားတာမျိုး။) အဲဒီတောင်တန်းမှာ စကြ၀တေမင်းဟာ သေလွန်သွားတဲ့အခါ သူ့နာမည်ရေးထိုးခွင့်ရသတဲ့။ စကြ၀တေးမင်းသေရင် အဲဒီနေရာကိုရောက်တယ်။ နာမည်ထိုးခွင့်ရတယ်။
စကြေးဝတေးမင်းသေရင် သူ့တပည့်တွေဆွေတွေမျိုးတွေကလည်းသတ်သေကြတယ်။ အတူလိုက်သွားလို့ရအောင်ဆိုပဲ။ အိန္ဒိယမှာအဲဒီအယူရှိတယ်။ ခေါင်းဆောင်နောက်ကို လိုက်ချင်တာ။အဲဒီလိုအယူအဆကနေဆင့်ပွားလာတာလည်းရှိတယ်။ အခုအထိ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ဆရာက ဘုရားဆုပန်ထားလို့ တပည့်ရဟန်းက သာဝကဆုပန်တာရှိတယ်။ အဲဒါလည်းလွယ်တယ်မထင်ပါနဲ့။ သာဝကဆုပန်တာကတော့ အင်မတန်စိတ်အင်အားကြီးမားမှပဲလုပ်နိုင်တာတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။ စကြေးဝတေးမင်းသေလို့သူ့တပည့်တွေလိုက်သေတာကတော့ နည်းနည်းမိုက်မဲတဲ့သဘောပါတယ်။ ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်။ လိုက်သေတဲ့အခါ သူတို့ဟာ တံခါးဂိတ်တစ်ခုကို အတူရောက်တယ်တဲ့။
အခုပုံပြင်စပါပြီ။ ရေးလာတာက ပုံပြင်ကိုနားလည်အောင် အခြေခံတွေပြောနေတာပါ။ စကြ၀တေးမင်းတစ်ပါး လွန်တဲ့အခါမှာပေါ့ မောင်လေး၊ညီမလေးတို့ရယ် .....။
ဂိတ်ဝကြီးကိုရောက်လာတဲ့စကြ၀တေးမင်းနဲ့ သူ့ရောင်းရင်းတွေကို မြင့်မြတ်သောတောင်တန်းက မြင့်မြတ်သောတံခါးစောင့်ကြီးက မြင့်မြတ်စွာမေးသတဲ့။
တံခါးမှုး . ...။ ။ဟိုက်ရှားဘား ... ဘယ်နှယ့်လဲ ...Refugee တွေလား ....။
စကြ၀တေးမင်း ...။ ။ ထပ်သရီး(သုံးထပ်သား) ... ကန်ကလေး ... ငါ *စကြ၀တေးမင်း အင် ဂို့စ်ဗားရှင်းမား။
တံခါးမှုး .....။ ။ ဟိုင်း ဆား .. ၀ဲလ်ခမ်းတူ မြင့်မြတ်သော တောင်တန်းဒေသ ...။ ယူ အာ အင်ချာ့ခ်ျအော့ဖ် ဿမ်း .. အမ် အိုင် right?
စကြ၀တေးမင်း။ ။(အိန္ဒိယကထားထဲကလို ဇက်ကြောဆွဲသလို တွန့်ပြီး) I cannot find any excuse to deny your statement ...or otherwise, "Yes". လို့ဖြေသတဲ့။
တံခါးမှုး ....။ ။ ကျွန်တော်တို့က တံခါးမှုးမျိုးရိုးပဲ။ အဖေလည်းတံခါးမှုး၊ သားလည်းတံခါမှုး၊ မြေးလည်းတံခါးမှုးဖြစ်မှာ .. တံခါးမှုးအလုပ်ဟာ legacy ပဲ။( စင်ကာပူမှာလည်း အဲဒီလို ဘိုးဘွားပိုင် ဒီမိုကရေစီအလုပ်ကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက်လုပ်ကိုင်တာရှိတယ်ကြားတယ်။ .. ထားပါတော့။) အခု စကြ၀တေးမင်းအနေနဲ့ နာမည်ထိုးဖို့လာတာဆိုရင် တပည့်တွေထားပြီး အရင်ဝင်၊ မဟုတ်ရင် နောင်တရနေလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို လုံးဝမခေါ်ဘဲ တစ်ယောက်တည်းအပြီးဝင်။ အခုက Options ပေးတာ။ ခဏ၀င်။ ခေါ်ချင်မှပြန်လာ။ ဒါမှမဟုတ် မခေါ်ချင်လုံဝထားခဲ့။
စကြ၀တေးမင်း။ ။ အိုင်ဆေး၊ လူကလေး၊ ငါအရင် ၀င်ကြည့်မယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ စကြ၀တေးမင်း နာမည်ရေးထွင်းဖို့ တောင်တန်းပေါ်ကို တက်လာလေသတည်းပေါ့ကွယ် ....။
တောင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ စကြ၀တေးမင်းရဲ့အမူအယာပြောင်းလဲသွားပုံကို နည်းနည်းဖွဲ့မှရမယ်ထင်တယ်။
ရုတ်တရတ် ... စကြ၀တေးမင်း၊ မျက်လုံးပြူးသွား၊ ပါးစပ်က ဟာ ခနဲရေရွတ်၊ လက်နှစ်ဖက်ကို နားထင်ကိုဖိထား ...။ ဘုရားဘုရားလို့အသံမထွက်ပဲ တိုးတိုးလေးရွတ် ....။ ချွေးစေးတွေစို့လာ မျက်ရည်တွေရစ်ဝဲ ...။ ခြေထောက်တွေခွေညွှတ် ... ဒူးဖြည်းဖြည်းချင်းထောက်သွား။(ရွှေ) မြေကြီးကိုလက်နဲ့ထု။ ..... အဲဒီလိုဖြစ်သွားသတဲ့။
ကြည့်လိုက်တော့ တစ်တောင်လုံး နာမည်အပြည့်ထိုးပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ တစ်ယောက်ပေါ်ဖို့ကြာလွန်းတဲ့စကြ၀တေးမင်းတောင်မှ သံသရာတစ်လျှောက်ပေါ်ခဲ့တာ များလွန်းပြီ။ လက်မှတ်တွေ၊ ဆိုင်းတွေ၊ ရုပ်ပြောင်တွေထိုးထားတာအပြည့်ပဲ။ တော်သေးတာပေါ့ .. အောက်ကလူတွေခေါ်မလာလို့။ မဟုတ်ရင် ကြိုင် တို့က ( မိဖုရားကြီးမှာ ဒေ၀ီဧကရီမေမဒီကြိုင် ဖြစ်သည်။) တို့တစ်ယောက်တည်း ထင်နေတာမှားသွားမှာ။ ဘုရားဘုရား .. ကံသီပေလို့ ၆ ကျပ်မကွဲတာပဲ။* တောက်သုံးမကျတဲ့ မျောက်ကတုံးမ လောကကြီး ....ဆိုပြီးဆဲသတဲ့။
စကြ၀တေးမင်း ။ ။ ဟေ့ ဘော့အီ (အမှန်က hey boy လို့ အသံထွက်တာ။ သူက ဗျစ်တစ်ခ်ျ အက်ဆန့်နဲ့မို့ ဘော့အီဖြစ်သွားတာ။) ... သိန်းခင် သိန်းခင် (Thank you ,Thank you)။ Your majesty လည်း ထိတ်ပြာ စိတ်နာ ... မထိတ်သာ မလန့်သာဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ တောင်ထိပ်မှာ ဆိုင်းတွေအပြည့်ကွာ၊ ထိုးစရာနေရာလိုက်ရှာတာမတွေ့ပါဘူး၊ ...* Mr. Kiss-My-Ass တွေ ဆိုင်းထိုးသွားတာပြည့်နေပြီကွာ။ သံဝေဂရတယ်ကွာ။
တံခါးမှုး။ ။ Oh ..Dear ..။ ဒီလိုလည်း သံ 60 ၈၇ တွေသိပ်မရပါနဲ့။တစ်ယောက်ယောက်နာမည်ဖျက်ပြီးထိုးလိုက်ပါလားဟင်။
စကြ၀တေးမင်း။ ။ *ဖွယ် .. ရိုင်းပလေ။ ငါဟာ မြင့်မြတ်သော စကြ၀တေးမင်း အင် ဂို့စ်ဗားရှင်းကွ။ လူများဆိုင်းလေးဖျက်ပြီးမှ ငါ့နာမည်ထိုးရမယ်ဆိုရင် ရှက်ပြီး သေဖို့ပဲကောင်းတယ်။
တံခါးမှုး။ ။ အင်း ... ကျွန်တော်မျိုးသက်တမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ခဲ့ရတာလည်း အရှင့်လို ဆိုင်းမထိုးဘဲ ထွက်သွားတဲ့ ဘုရင်တွေကြီးပါပဲဘုရာ့ ...။ ဒီနေရာမှာဆိုင်းထိုးခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပါပဲ။ ရှေ့လူတွေရောက်နှင့်ပြီဆိုတာလည်း အမှန်ပါပဲဘုရာ့ ...။ .... နောက်လူတွေလည်းရောက်လာဦးမှာပါဘုရာ့ ........။
.........အင်း ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ခဏလေး လာထိုင်နေရတဲ့ လူ့ဘ၀ခုံတန်းလျားလေးမှာ နာမည်တွေထိုးကြဦးမှာလား။ အိုင်မမ် Zephyr the great (1982-2082) စသဖြင့်တွေ။ .. ရာထူးတွေ၊ ဂုဏ်၊ရွှေ၊ငွေ၊ အကြွေးတွေ .. ၊စသဖြင့်တွေနဲ့ ဘာတွေလုပ်နေကြမှန်းကို မသိဘူး။ ရထားလာရင် ခုံကနေထရမယ်။ ရထားထဲဝင်ရမယ်။ ဆက်သွားရမယ်။ ခုံမှာထိုင်နေတုန်းလေး ငါ့ခုံလုပ်နေမယ်ဆိုရင် ခုံပျောက်သွားရင် ဘ၀ဟာအဓိပ္ပာယ်မဲ့သွားမယ်။ ဒီခုံမှာပဲ နာမည်ထိုးသွားသူတွေများလွန်းနေပြီ။ ရှေ့ကအရူးတွေနဲ့ နောက်လာမယ့်အရူးတွေ၊ Mr. Kiss-My-Ass တွေ။ ကျွန်တော်တို့လောကကြီးဟာ နာမည်တွေနဲ့ညစ်ညမ်းနေပြီ။ ခဏလေးလာထိုင်ရတဲ့ခုံဆိုတာမေ့ပြီ။ ရထားစောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုမေ့ပြီ။
ဒီနေ့တော့ ခင်ဗျားတို့ကို ရထားရောက်လာရင် ခင်ဗျားဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုမေးရင်းနဲ့ ဘာဘာမုတ်ဆိတ်ရိတ်မရဖြစ်နေမှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်း .... နှုတ်ဆက်ပါတယ် .....။ ။
*တောက်သုံးမကျတဲ့ မျောက်ကတုံးမ is from Xanthos' အဆဲဋီကာ
*စကြ၀တေးမင်း အင် ဂို့စ်ဗားရှင်းမား -Chakravarti in ghost version (မား ကတော့ သူလည်း Singlish ကိုလေ့လာဖူးတယ်ဆိုတာသိအောင်ပါ။)
*Mr. Kiss-My-Ass - And I'm the sinister, Mr. Kiss-My-Ass ဆိုတဲ့ Eminem Renegade မှာရွတ်တဲ့ rhyme ကို သဘောကျလို့ပါ။ Mr. Kiss-My-Ass ဆိုတာကိုတွေ့ရင် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း မစ္စတာမှိုင်းလို့ပြောတာကို သတိရပါတယ်။ မောင်မှိုင်းဆိုတာ အဲဒီအချိန်က တကယ့်ကို ကလေကချေဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့နာမည်ပါ။ မစ္စတာတွေတပ်တာများလွန်းလို့ေ-ာက်ညင်ကတ်ပြီး အဲဒီလိုအကောင်မျိုးရဲ့ နာမည်ရှေ့မှာ မစ္စတာခံပြီး ... မစ္စတာမှိုင်းဆိုပြီး လုပ်တာပါ။ အဲဒီလို လုံးဝမတူတာနှစ်ခုကို တွဲသုံးလိုက်တဲ့အခါ ရူပကအလင်္ကာ လေဖြတ်သွားတဲ့ရသမျိုးခံစားရပါတယ်။
*ဖွယ် ရိုင်းပလေ - ဒါကတော့ စလေဦးပုညရဲ့ ဘုရင်က ဟယ် အစား ဖွယ် ဆိုပြီး မြည်တွန်တောက်တီးသံလုပ်ထားတာကို သဘောကျလို့ပါ။ အဲဒီအချိန်က အသုံးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေသည်ပြဇာတ်မှာ ရေသည်ကနေ၊ ရေသန့်စက်ရုံထောင်၊ နောက်တော့ကြီးပွားလာတဲ့အခါ ဘုရင့်သမီးကိုယူပြီး အိမ်ရှေ့မင်းဖြစ်လာ၊ ဘုရင့်ကို လုပ်ကြံဖို့ကြိုးစား၊ နောက်တော့ သံဝေဂရတဲ့အခါ ပြောတဲ့စကားပါ။
ငါးခုံးမပုတ်တွေချည်းရွေးတင်လာတဲ့ ၂၁ ရာစုလှေကြီး။